Translate Sindhi to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Sindhi to Myanmar (Burmese), Sindhi to Myanmar (Burmese) translations, Sindhi to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
سلام توهان ڪيئن آهيو မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
ڇا ڪنهن کي آهي؟ မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
مون کي توهان کي تمام گهڻو پيار آهي ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
هي هيمبرگر جي قيمت ڪيترو آهي؟ ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
ڇا تون مونکي ٽيڪسي سڏين ٿو؟ သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
مونکي معاف ڪجو ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
معاف ڪجو တဆိတ်လောက်
مان دلچسپي آهيان ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
منهنجي پرواز کي دير ٿي وئي အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
مان هتي ڪاروبار لاء آهيان ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
هيلو منهنجو نالو آهي မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
معاف ڪجو، پر آء شادي شده آهيان ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
آئون توهان کان پڇڻ چاهيان ٿو ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
ڇا توهان ايئرپورٽ ڏانهن وٺي سگهو ٿا؟ သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
مهرباني ڪري وقت ڇا آهي، مهرباني ڪري؟ ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
ويجھي پوليس اسٽيشن ڪٿي آهي؟ အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
ڇا مان توهان جي فون چارجر مهرباني ڪري قرض ڏئي سگهان ٿو؟ ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
ڇا توهان منهنجي مدد ڪري سگهو ٿا؟ ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
مهرباني ڪري مون کي پيئڻ جو حڪم پيئي؟ ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
ان جي قيمت ڪيتري آهي ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
مان ڦلجي پيو آهيان ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
هڪ ڊاڪٽر کي ڪال ڪريو ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
ڇا ڊاڪٽر آهي؟ ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
ڇا ڪري سگهان ٿو؟ ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
مون کي پنهنجو باس ڪريو مهرباني ڪري. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
هي جڳهه تمام سٺو آهي ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
مهرباني ڪري هوٽل تي مهرباني ڪري ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
منهنجي ڪمري جو نمبر ڇا آهي؟ အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?